Ilay fasako, fasako ihany,
fa ny foko dia fasana koa!
Io no fasako ivelan'ny tany,
Io no fasako iray, faharoa!
no manafina an'io fasana io
Izy ireny no sarin'avelo
izay nisinda nalaky, tsy hita!
ilay sambo nataoko ho tafita!
Ao ny tsantan'ny andro taloha
sy ny hiran'ny fahazazako
no milevina ka tsy mifoha,
na miverina mba hitondra ako!
saingy simba, ka very tadidy!
Ao ny taolan'ny androko lasa,
sy ny ora tsy masi-mandidy!
ao ny maty daholo daholo!
ka mianjera tsy mana-mpisolo!
Io no fasako iray faharoa!
Extrait de "Takelaka notsongaina I"- p.126 Fasana faharoa